Homeसमाचारतिव्वतियनको नेपालमा व्यवसायीक घोडा पालन, चीनले स्वदेश फ’र्कन दिएन (भिडियो सहित)
January 14, 2021 admin समाचार 7190
विगत लामो समयदेखि नेपालमा ति’व्वतीयन नागरीकहरुको पनि बसोबास रहेको छ । चीनले तिव्वतलाई आ’फ्नु नियन्त्रणमा लिएसँगै केहि तिव्वतियन नागरीकहरु नेपाल आएका थिए । त्यसपछि उनिहरु नि’रन्तर रुपमा नेपालमै बसीरहेका छन ।
बागलुङको ढोरपाटनमा बस्दै आएका तिव्वतीयन ना_गरीक सोनाम लामा नेपालमै जन्मिए । उनले आफ्नु देश चिन तिव्वतमा पाइला पनि टेकेका छैनन । सोनाम अहिले ढोर’पाटनमै घर छ । उमेरले ४८ पुगेका उनि परि’वारसहित खेतिकिसानी गरेर बसीरहेका छन । सोनामले ११ वटा घोडा पनि पालेका छन । बाउबाजेको पा’लादेखि पाल्दै आएको घोडा अहिले पनि निर’न्तरता दिइरहेका छन ।
आज उ_निसँग घोडा पाल्न के कस्ता चुनौति छन ? के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? कति पर्छ लगायतका व्य’वसायीक घोडा पालन र सरणार्थी बनेर बस्दाका दुख सुखबारे अन्त’रंग कुराकानी गरेका छौँ । भिडियो पुरा हेरेर प्रति’कृया दिनुहोला । – ओएस नेपालबाट
चिया बेचेर लाखौं कमाउँछु भन्ने सुन्दरिको कोठा यस्तो देखियो, अनमोललाई चिया खुवाउने रहर (भिडियो हेर्नु`स)
December 27, 2021 admin समाचार 2650
केही दिन देखि काठ`माडौको असन क्षेत्रमा चिया बेच्दै हिड्ने सरिता सामाजिक संजालमा निकै भाइरल बनेकी छिन । उनले थर्मसमा चिया बोकेर पसल पसलमा चिया बेच्दै हिडेको फोटो तथा भिडियो निकै भाइरल बनेको छ अहिले सामा`जिक
December 15, 2018 Administer समाचार 60614
February 12, 2021 admin समाचार 6545